ဖြိုး အလ်ဝိုင်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့ (အပိုင်း ၁၄)
ကျွန်တော်ပြောနေကြ သုံးနေကြ စကားလေးက တယ်မှန်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ တကယ်ဖာသယ်ပါးစပ်ဆိုတာ တကယ်မှန်တယ်ဗျာ.... တသက်လုံး အဘယ်အချိန်ကာလမှ ဂေါတာမမိန်းမ (၅)ယောက်ယူတဲ့ အကြောင်းကို မဆိုခဲ့ဘူး။ မိုဟာမက် မိန်းမ အများကြီး ယူတာကိုပဲ အဟုတ်ကြီးလုပ်လို့ အဲတာကြတော့ ပါးစပ်ကနေ စမြွုတ်ပြန်အောင် ပြောကြတယ်. အခုကျုပ်ဖော်ထုတ်တော့ မှာ ငြင်းနေလို့လားတဲ့ တယ်လည်း ရီဖို့ကောင်းတယ် နင့်တို့ လိမ်လို့ မရအောင် အထောက်အထားနဲ့ ပြတော့ နင့်တို့ လိမ်လို့ ဘယ်ရတော့မလဲ.. ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးတို့ရဲ့ ....
အောက်ကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ ဒီပို့ဒ်မှာ ကွန်မန့်လာပေးသွားတာပါ. http://messengerforbuddhist.blogspot.com/search/label/%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%81%80%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC%20%E1%80%B1%E1%80%82%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%99
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ဟာ ဒေ၀ဒဟပြည် နှင့် ကပိလ၀တ်ပြည်၏ အကြားရှိ လုမ္ဗိနီသာမော အင်ကြင်းတော ( ယခင် က အိန္ဒိယ ၊ ယခု နီပေါ နိုင်ငံ တောင်ဘက် အခြမ်း ) မှာ ဖွားမြင်တော်မူခဲ့တယ် ။ ဂေါတမ ဟာ အိန္ဒိယ အနွယ်ဖွားမဟုတ်ပါဘူးလို့ ဘယ်သူက ငြင်းနေလို့ လဲ ။
လက်ခံထားလို့ သာ သိရိလင်္ကာ မှာရှိတဲ့ ဘုရားဖွားမြင်တဲ့နေရာ ၊ ဘုရားအဖြစ်ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို လူတွေသွားနေကြတာပေါ့ ။
ဂေါတမ ဘုရားကို အိန္ဒိယ အနွယ်ဖွားဆိုတာလည်း ယုံတယ် ။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲ .. တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက ကေ ငြင်းနေလို့ လား .. ။
ဒါပေမယ့် မူဆလင် ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ တူလား ..။ မင်းပြောတဲ့ကုလားဆိုတာ ဘာကုလားလဲ ?
(ငါပြောတဲ့ ကုလားက ချေးချုံးကုလားဂေါတာမ မျိုးနွယ်ကိုပြောတာဟ ဟိန္ဒူက နင့်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဂေါတာမ့ကို ဘုရားအဖြစ်မသတ်မှတ်ဘူး ဇာတ်နိမ့်ကုလားဆိုပြီး မကိုးကွယ်ကြဘူး)
ဟိန္ဒူဘာသာ နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အများကြီးဆပ်စပ်မှုရှိတယ် ။ ဒါကိုလဲ လူတိုင်းလက်ခံထားတာပဲ .။ ဟိန္ဒူက နတ်ကိုးကွယ်မှူ များတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လဲ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ။ ( yushweyi.yu@gmail.com )
(ဘယ်သူကပြောလဲ ဟိန္ဒူက ဗုဒ္ဓဘာသာဘာလို့ အခုကြတော့ ဟိန္ဒူနဲ့ အမျိုးသွားစပ်ပြန်ပါပြီး)
ဂေါတမဟာ ဟိန္ဒူအနွယ်ဖွား ကုလားဆိုပြီးမင်းပြောပါလား .။ ဘာကိစ္စလက်မခံရမှာလဲ ။
ဂေါတမ မဖြစ်ခင် မိန်းမ ငါးယောက် ယူတာ ဘာလုပ်ရမှာလဲ ။ သူ့ ဘာသူ ဘုရင်မို့ လို့ ငါးယောက်ယူတာ ။ ဒါကလဲ ဘုရားမဖြစ်ခင် ကာလ သိတ္တဿမင်းသား အဖြစ်ကာလပဲရှိသေးတယ် ။
အဲအချိန်ကိုလဲ ဘယ်သူကမှ ဘုရားပါဆိုပြီး မကိုးကွယ်ဘူး ။ ဘုရင်တစ်ယောက်အနေဲ့မိဖုရား ငါးယောက်ယူတာဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ။
(ဘုရင်ငါးယောက်ယူတာ မဆန်းပါတဲ့ဗျ သူတို့ပဲ ပြောတာပါ ဂေါတာမက မွေးကတည်းက ဘုရားလောင်းတဲ့ဗျာ မိခင်ဗိုက်ထဲက မွေးမွေးချင်း ခြေခုနှစ်လှမ်းတောင် လှမ်းတယ်တဲ့ အိုး မိန်းမငါးယောက်ယူတဲ့ ဇာတ်လမ်းက ဒါဆို မိခင်ဝမ်းထဲက မထွက်ခင်ကတည်းလား.... တော်ကြာအဲလိုပြောလို့ ဘယ်ဘ၀က ယူတာ ဒီဘ၀ယူတဲ့ဆီကို လွှဲချအုံးမယ်..... လွှဲချလို့တော့ မရဘူးခင်ဗျာ. သေသေချာချာကို သမိုင်းနဲ့အကိုးအကာနဲ့ကိုပါ ဂေါတာမက မိန်းမ(၅) ၇ှိတယ်ဗျာ... အခုကြတော့ ဘုရားမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ တတ်လဲ တတ်နိုင်ပါပေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအလိမ်အညာတို့ရေ ဒီလိုမိန်းမ(၅)ယောက်ယူတဲ့ကောင်တောင် ဘုရားဖြစ်သေးတာ တောထဲမှ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျင့်နေတဲ့ ဂုရုတွေ ဘုရားမဖြစ်ကြဘူးနော်... ဘာကြောင့်လဲ ဘာ့အတွက်လဲ ဖြေပေးပါဗျာ ယုတ္တိဆန်ဆန်လေး)
( ကိုယ့်မိခင်ကိုယ် ပြန်ယူတာမဟုတ်သေးပါဘူး) မူဆလင်ဘာသာကမှ သာမာန် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က မိန်းမ ၄ ယောက်တရားဝင်ယူလို့ ရနေတာပဲ ။ အဲဒီအချိန်က့ဘုရင် တစ်ပါးက မိန်းမ ငါးယောက်ယူတာဆန်းလား ?
( မူစလင်မ်မှာက ယူလို့ရတယ်လို့ပဲပြောတာ အတင်းပေးစားနေတာမဟုတ်ဘူး ရှာကျွေးနိူင်ရင် ယူ အဲယူတဲ့သူကိုလည်း ကိုးကွယ်နေကြတာမဟုတ်.. ဘယ်ဘာသာဝင်ထဲမှာ မိခင်ကိုယူရမယ်လို့ ပြောထားလို့လဲ မေးတဲ့မေးခွန်းကို မေးရဲတဲ့သူကသာ မေးရဲတာ ဖြေရမယ်သူတောင် မိခင်ဝေါဟာရ ပါလားလို့ ကြေက်ရွံမိလာတယ် ဒါမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလား မမေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလားဆိုတာ မစဉ်းစားဘူး)
နောက်ပြီးမင်းပြောတဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေမီးရှိူ့ တာတို့ ဘာတို့ က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဟန်ပြယုံလောက်ကိုးကွယ်ပြီး အရည်းကြီးသဘောနဲ့ ကျင့်ကြံနေကြတဲ့ စစ်အစိုးရ နအဖ တို့ တွေလုပ်တာပဲ ။ ဘာဆိုင်လို့ဘာသာရေးနဲ့ လာပြီး နှိပ်ကွပ်နေတာလဲ ။ အဲဒီလို လုပ်တာ စစ်အစိုးရလုပ်တာဆိုတာ ကလေးက အစသိတယ် ။ ဦးနှောက်ရှိရင် စဉ်းစားပေါ့ ။
(အေးနင့်တို့ ဖာသယ်ပါးစပ်နဲ့ လူတွေ
ကတော့ ကလေးက အစသိအောင် လုပ်နိုင်တာကို ငါရင်လေးမိတာ နင့်တို့မြန်မာတွေ လိမ်သမျှကို တတ်လာပါပြီးဟဲ့ တော်လှပါပြီဟဲ့ဆိုတဲ့ အတတ်ပညာရှင် (အနောက်တိုင်းသား)တွေ လိမ်ခံနေရတာကိုပဲ ငါရင်လေးမိတယ်....... တသက်လုံး ဘုန်းကြီးတွေက အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမူက ဘယ်လို ဘယ်ကဲသို့ရှိတယ် အခုကြတော့ သွားချင်လိုက်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ မောင်းတောင် ထုတ်ယူရမယ်......
နအဖက ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ ချေးချုံးကုလားကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာလား နင်တို့ထက်တောင် တရားသိသေးတယ် သူတို့စေတီတွေ နင်တို့တောင် မဆောက်နိူင်ဘူး နင့်တို့ထက်တောင် ဘုရား တရားသိသေးတယ်ဆောက်နေတာ မတွေ့ဘူးလား ငနာဘုန်းကြီးတွေနဲ့ နှစ်ပေါက်တစ်ပေါက် ရိုက်ပြီး ကမ္ဘာကို လိမ်နေတာ မဟုတ်လား နင့်တို့ဖြစ်တဲ့ ပြသာနာကို နင်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ အရုပ်ကြီးဆီမှာ တောင်းပါလား အဲဒါကြောင့် ပြောတော့ပေါ့ နင့်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုရားများသည် နားရှိသော မကြားတတ် ပါးစပ်ရှိသောလည်း မပြောတတ်ဆိုတာ တကယ်မှန်တာ နင့်တို့အဲလိုဖြစ်တော့ နင့်တို့ကို စောင်ရှောက်ပေးထားတဲ့သူတွေ
ကို နင့်တို့ဘာလို့ မကိုးကွယ်တာလဲ ဘာလို့စောက်ရုးချီးဂတုံးတွေပဲ ကိုးကွယ်ရလဲ ပြီးရင်ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ငြိမ်းချမ်းပု၈္ဂိုလ်လိုလို ဘုရားလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ဂတုံးတွေ ငနာတွေ)
သူများဘာသာကို နှိပ်ကွပ်တဲ့စာမျိူးတွေရေးနေမယ့်အစား မင်းဘာသာကိုမင်းတိုးတတ်အောင် ကြံဆောင်သင့်တယ်.
လောကမှာ ဘယ်ဘာသာ ကောင်းပါတယ်လို့ ငါမပြောလို ဘူး ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ဘာသာရေးဆိုတာ စာအုပ်ဖတ်ပြီးပြောရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး ။
(အထောက်အထားတွေ စုံလင်စွာပြလာတော့လဲ စာအုပ်ဖတ်လို့မ၇ဘူးတဲ့ နင်တို့ရောက်လာတုန်းကလဲ စာအုပ်ကြီးပဲ မဟုတ်လား သူများဘာသာကို တိုက်ခိုက်တော့ လည်း စာအုပ်ဖြန့်ပြီး တိုက်တာမလား)
ကိုယ့်စိတ်ဝိဥာဉ်ထဲက လက်ခံထားတဲ့အရာ ပဲ ..
မင်းတို့ ဘာသာကို စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးဖတ်ပြီးငါပြောတဲ့ အရသာ ထက် အသက်ငါးနှစ်လောက်ရှိသေးမယ့် မင်းတို့ ဘာသာဝင်ကလေးတစ်ယောက် ပြောတဲ့အရသာက ပိုသာမှာပဲ ။ ဘာသာရေးဆိုတာ စာအုပ်မဟုတ်ဘူး .. အလွန်နက်ရှိုင်းသိမ်မွေ့ တယ် ။
မစော်ကားပါနဲ့ သူများဘာသာကို .။ မင်းဘာသာကို စော်ကားခဲ့တဲ့ လူရှိရင်လဲ အဲလူရဲ့ စာမျက်နှာမှာပဲ ပြန်ပြောလိုက် ။ အားတဲ့အချိန်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါဦး
တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ပြောရင်တော့ ၀ဋ်လည်မယ် ။ မင်းတစ်ချက်စော်ကားလိုက်တိုင်း တစ်နေရာရာမှာ မင်းဘာသာကို ပြန်လည် စော်ကားခံလိုက်ရမှာပဲ ။
(၀ဋ် ဆိုတဲ့ နင်တို့ သုံးနေတဲ့ စကားကို ပြန်သုံးရမယ်ဆို ငါတို့ ၀ဋ်လည်တာမဟုတ်ဘူး နင်တို့ ၀ဋ်လည်တာ နင်တို့ တွေ့သမျှဘာသာတိုင်းကို စော်ကားတယ် ရစရာမရှိအောင် တိုက်ခိုက်တယ်.. ဒါလား ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်ဘာသာ တည်တံဖို့ ဒီပြင်ဘာသာကို မဟုတ်မဟက်တွေနဲ့ စွပ်စွဲရလား မွတ်စလင်ကို ကြတော့ လီးကိုးကွယ်နေပါတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲလို့ စွပ်စွဲ ခရစ်ယာန်ကိုကြတော့ ခရစ်တော်က နင့်တို့ငနာစောက်ဂတုံး စောက်ပျင်းဘုန်းကြီးတွေ
ဆီမှာ တပည်သွားခံပါတယ်လို့ စွ့ပ်စွဲလို့ စွပ်စွဲနဲ့ အဲလို့ ပြောတာ နင့်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးဂတုံးတွေမဟုတ်ဘူးလား ကိုယ်ဘာသာတည်တံဖို့ အဲလို့ မဟုတ်မဟက်တွေ့နဲ့ စွပ်စွဲရလား ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးတို့ရေ အဖြေပေးပါ နင့်တို့လုပ်တာတွေ ကမ္ဘာကိုပဲ လိမ်လ်ိမ်ပါ ငါကတော့ နင့်တို့ကြားထဲမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့သူဆိုတော့ နင့်တို့ဖာသယ်ပါးစပ်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိပြီးသား ငါအခုပြောပြီးသားအကြောင်းအရာတွေမှာ လုပ်ကြံထားတာ ပါလား နင်တို့ဘာသာရဲ့ မဟုတ်မဟက်တွေကို နင့်တို့ကျမ်းက အတိုင်းပဲ ဖော်ပြနေတာ)